पारदर्शी हुनुहोस् भन्दा उल्टै कारबाही ! | Mechikali Daily
पारदर्शी हुनुहोस् भन्दा उल्टै कारबाही !
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १७ श्रावण २०७४, मंगलवार ०४:५६
बुटवल, । ‘अध्यक्ष ज्यू यो लेवी उठाएको पैसाले के गर्नु हुन्छ ? केही न केही त चालक हितका काम हुनुप¥यो नि !’ एम्बुलेन्स चालक विक्रम तिवारीले आफ्ना संगठनका अध्यक्षलाई यस्तो जिज्ञासा राखे ।
त्यसको भोलिपल्ट ती चालक तिवारीलाई उनले काम गर्ने कार्यालयबाट फोन आयो र भनियो–‘तपाइँका विरुद्धमा उजुरी परेको छ तुरुन्त आउनुहोस् ।’ उनी तत्कालै कार्यालयमा पुगे । त्यहाँ उनलाई संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ, जिल्ला समिति रुपन्देहीका नामको लेटर प्याडमा लेखि पठाइएको पत्र देखाइयो ।
उनलाई संघले चालकको जागिरबाट हटाउन भन्दै पत्र लेखेको रहेछ । उनले तीन वर्षदेखि परिवार नियोजन संघ (परिवार क्लिनिक) को नाममा रहेको एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । उनको स्पोष्टोक्तिपछि संघले तत्काललाई यथास्थितिमै बस्न आग्रह ग¥यो र एम्बुलेन्सको चाबी उनैलाई नै थमायो ।
‘मैले अध्यक्ष ठाकुर सापकोटालाई यस्तो सवाल गरे त्यसको बदलामा मलाई जागिरबाटै हटाउने खेल भएछ’ तिवारीले मेचीकाली कार्यालयमै आएर भने–राजनीतिक पूर्वाग्रह भयो । यस्तो संवेदनशील विषयमा जिज्ञासा राख्दा पनि किन आफूमाथि अन्याय भयो भन्ने कुराले उनलाई मनमनै पोलेछ, कैयौँ दिनसम्म उनी आ, जेसुकै होस्, भन्ने लागेछ ।
तर, यस्तो घटनामा अरु आधा दर्जन जति चालक मजदुरहरु परिसकेको जानकारी पाएपछि उनी यत्तिकै चुप लाग्न नहुने भन्ने निश्कर्षमा पुगेर आफूले लेखेको निवेदन र उनलाई हटाउन लेखिएको अर्को पत्र दुवै बोकेर मिडिया सम्म आएका रहेछन् ।
उनले आफूले केही कमजोरी नगरेको, त्यो पनि पारदर्शी हुनुहोस् भन्ने विषयमा सामान्य भनाभन मात्रै भएको बताए । उनले कमी कमजोरी भएको अवस्थामा आफूलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गर्दै यो तरिकाको कारवाही गैरकानुनी भएको दावी गरे ।
यस अघि पनि चालकहरु कृष्ण पुरी, रमेश थापा, सन्तोष गुरुङ तथा चिजकुमार दुवेलगायतका मजदुरहरुलाई संघले यस्तै प्रकृत्तिको पत्र पठाएर जागिरबाट हटाउन लगाएको रहेछ ।
‘उनीहरुले केही कमजोरी गरेकै थिएनन्, संघलाई पारदर्शी बनाऔँ,बरु रकम बृद्धि गरेर एउटा केष बनाऔँ र हक हितका पक्षमा प्रभावकारी काम गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए’ अर्का चालक कृष्णले भने–सरासर राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको छ ।’ आफू आवद्ध रहेको संगठनलाई सबल बनाउने र त्यसका गतिविधिहरु चालकमैत्री हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको तर, त्यसलाई व्यवास्ता गरिएको चालक तिवारीले बताए । संघले केही चालकहरुलाई राहत स्वरुप केही रकम प्रदान पनि गरेको स्वयम् तिवारीको भनाइ छ । उनीहरुकै पहलमा बलबहादुर गुरुङ र राकेश गुप्ताका परिवारलाई पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराइएको थियो ।
कतिपयले संघको नेतृत्वमा रहेकाहरुका गतिविधिका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका रहेछन् तर उनीहरुका त्यस्ता जिज्ञासाको समाधान गर्नुको साटो उल्टै धम्क्याउने काम भएको ती चालकहरुको गुनासो छ ।
आफूहरु नै मिलेर हकहितका पक्षमा पैरवी गर्ने र आपतविपत पर्दाका बखत मिलेर सामना गर्नेगरी यस्तो संघ स्थापना भएको रहेछ । तर, सोही संघले नै जागिरबाट हटाउन भन्दै अनाहकमा पत्राचार गरेर चालकहरुलाई त्रसित बनाएपछि संघका गतिविधिकै बारेमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
रुपन्देहीका विभिन्न संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानका एम्बुलेन्स चलाउने सवारी चालकहरुले १२ वर्ष अघि संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ गठन गरेका थिए । यसैलाई केन्द्र स्तरको बनाउने पहल गरिएको वर्षौं भएपनि यो अहिलेसम्म जिल्लामै सिमित छ । यद्यपि कुनै पनि निकायमा औपचारिक रुपमा दर्ता समेत नभएको बताइएको छ ।
यो संघमा तिवारी भने सात वर्ष अघि आबद्ध भएका हुन् । उनीसहितका आबद्ध सदस्यहरुले मासिक तीन सय रुपैयाँ लेबी स्वरुप जम्मा गर्छन् । सोही रकमलाई के कसरी खर्च गर्ने हो ? कस्तो मापदण्ड बनाएर कोष बृद्धि गर्ने हो ? भनेर जिज्ञासा राख्दा अध्यक्ष र यीनै तिवारीका बीचमा लामै भनाभन भएको रहेछ । सोही क्रममा सामान्य गालीगलौज समेत भएको तर क्षणभरमै साम्य भएको तिवारीले स्वीकारे ।
संघका अध्यक्ष सापकोटाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो प्रवृत्ति देखाएको चालकहरुले गुनासो गरेका छन् । यो संघमा हाल ६५ जना चालकहरु आवद्ध रहेका छन् ।
संघको अध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद सापकोटा, उपाध्यक्षमा शैलेन्द्र थापा, सचिवमा चुडामणि बस्याल तथा कोषाध्यक्षमा सुरज तिवारी र सल्लाहकारमा मुक्ति काफ्ले रहेका छन् । यी मध्ये अध्यक्ष सापकोटा माओवादी केन्द्र निकटका रहेको चालकहरुले बताएका छन् ।
केही समयलाई सुध्रिने मौका दिएका हौँ – अध्यक्ष
यता संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका जिल्ला अध्यक्ष ठाकुर सापकोटाले धेरै पटक स्पष्टीकरण लिएको तर, सुधार नभएकाले यस्तो कारबाही गरिएको दावी गरेका छन् । कारवाही केही समयका लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ । उनले कार्यसमितिका साथीहरु बसेर सुधार गर्नका लागि भन्दै ६ महिनासम्म कारवाही गरी जागिरबाटै निकाल्न भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । किन यसो गर्नुभयो ? मिल्छ र त्यसो गर्न ? भन्दा उनले सबैको सल्लाहमा गरिएको हो भने । अपशब्द बोलेको र त्यस्तो प्रवृत्ति दोहो¥याएको उनको आरोप छ । उनले अरु सदस्यहरुलाई अनुशासनमा राख्नका लागि पनि यसो गरिएको दावी गरे ।